आज २८ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवस, के त्यो मृत्युको कारण दुर्घटना नै थियो ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » आज २८ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवस, के त्यो मृत्युको कारण दुर्घटना नै थियो ?
काठमाडौं । आज जेठ ३ अर्थात् मदन भण्डारी–जीवराज आश्रित स्मृति दिवस । आज जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २८ औैं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै छ । आजका दिनमापनि यसलाई आम मानिसले दुर्घटना स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ? अधिकांशले यसलाई रहस्यमय निधन नै भनेका छन् ।
मदन र जीवराजलाई आफ्नो आदर्श नेता मान्ने नेकपा एमाले लगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्मरण गर्दैछन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको २०५० जेठ ३ गते आजकै दिन दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो ।
जिप त्रिशूली नदीमा खसेर दुर्घटना हुँदा भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएको थियो भने जीप चालक अमर लामा भने बाँच्न सफल भएका थिए । दुर्घटनाका साक्षी चालक लामाको २०६० सालमा दे’हवा’शन ग’राइ’एपछि घटना रहस्यकै गर्भमा रहेको छ ।